Nooca 'PUBG Mobilada' 0.10 wuxuu imaan doonaa Diisambar 20 oo leh khariidadda cusub ee barafka Virkendi | Androidsis
Manuel Ramirez | | Noticias, PUBG Mobile
Maalin war buuxa leh dhammaan kuwa soo gali doona Nooca mobilada ee PUBG 0.10 oo ay kujiraan khariidada barafka cusub ee Vikendi. Taasi waa in la yiraahdo, wixii ka muuqda, waxaan lahaan doonnaa khariidadda barafka isla nooca PC-ga ah. Marka horumarku wuxuu u socon doonaa si isku mid ah si aan ugu raaxeysanno khariidadda barafka Diisambar 20.
Haa, sidaad u akhrisay, the Diisambar 20 waa maalinta la xushay markaa noocaas 0.10 ee PUBG Mobile ayaa yimid kaasoo aan ku qaadan karno mawduuca ugu wanaagsan ee Kirismaska ​​ee ciyaarta aan ugu jecel nahay; iyo in dhawaan uun la magacaabay labada Google Play iyo loogu talagalay Golden Joystick ciyaarta ugu wanaagsan ee mobilada sanadka.
1 Khariidadda cusub ee Vikendi
2 Liiska oo dhan waxa ku cusub nooca 'PUBG Mobile version' 0.10
2.1 Khariidad cusub iyo isbeddelada ciyaarta
2.2 Isbedelada mawduucyada
2.3 Isbeddelada lammaanaha
2.4 Kordhinta amniga
2.5 Abaalmarinta hagaajinta
2.6 Horumar kale
Khariidadda cusub ee Vikendi
Waxaan horey usbuucyo dhowr ah ugu jirnay xilli ciyaareedka cusub ee yimid oo leh qaabka 0.9.5 taasina waxay keentay wararka qaar, inkasta oo aysan u badnayn sida ay kuwa kale ku ahaayeen cusbooneysiinta waaweyn. Waana wax walba oo la diyaarinayay si aan ugu raaxeyno khariidada cusub ee barafka ee loogu magac daray Vikendi. Waxaan kugula talineynaa inaad ku raaxeysato mid kasta oo ka mid ah 7da daqiiqo ee fiidiyowga ah ee laga daawado YouTube-ka halkaas oo aad ka heli karto meelaha ugu xiisaha badan.
Khariidadan waxaan awoodnaa sahamiyaan magaalooyin kala duwan oo baraf leh iyo waxa uu noqon karo suuf gantaalada hawada sare. Aynu tagno, waa khariidad dhan 6km x 6km iyo inay la socoto baabuur baraf wata iyo xaalad cimilo cusub oo baraf badan leh. Mana la waayi doono in jasiiradda spawn aan ku ciyaari karno dagaal baraf ah si aan waqti fiican ugu helno toddobaadyadan nalagu soo tuuray.
Marka waxaad bilaabi kartaa inaad hesho maqaar cusub oo cadaan ah si aan gebi ahaanba looga dareemin khariidad taas oo midabada dhalaalaya ay khatar badan ku yeelan doonaan nolosheena. Taasi waxay tiri, waa lagu daray moodel cusub Ghillie (Miramar waxay ahayd jaalle) gebi ahaanba caddaan. Ha moogaan khariidada aan wadaagno oo aad ka arki karto dhammaan meelaha Vikendi, khariidadda cusub ee barafka.
Liiska oo dhan waxa ku cusub nooca 'PUBG Mobile version' 0.10
Waa lagama maarmaan in markale lagu celiyo in haddii taariikhda Diisambar 20 ay tahay tan dhabta ah, PUBG Mobile-ka kama duwanaan doono PUBG. Taasi waa, sidaani waa guusha kulankaan ku saabsan aaladaha moobaylka in la go'aansaday in la dardar galiyo dhamaan howlaha si labada barnaamij ay u helaan wararka isla waqtigaas ama xitaa ka sii horreeya.
Khariidad cusub iyo isbeddelada ciyaarta
Nuevo 6 x 6km Khariidada barafka ee Vikendi.
Waxaa la heli doonaa si loo soo dejiyo Diisambar 20 markay tahay 00:00 UTC. Lamaanayaashu ma dhici doonaan illaa hal maalin ka dib.
Habka hawada cusub: Baraf.
Baabuur cusub oo gaar ah oo loogu talagalay Vikendi: Baraf baraf.
Lagu daray jasiiradda isbaanishka ah Kubadaha barafka.
Naqshad lagu daray ciyaartoyda leh gacmo waaweyn.
Lagu daray bandhig ay lajireen guuleystayaasha Kooxda Loolanka ee jasiiradda ka bilaabeysa Erangel. Kooxaha ku guuleysta xilli-ciyaareedka 1 ayaa ka soo muuqan doona Jasiiradda Starter ee adeegyadooda iyo qaabkoodaba.
Ciyaartoyda leh natiijooyinka ugu wanaagsan ee Tartanka Guruubyada waxaa lagu soo bandhigi doonaa boggaga kooxda waxaana lala wadaagi karaa ciyaartoy kale
Mawduuc cusub oo baraf ah ayaa lagu daray menu-ka weyn.
Ururi dawanno dhammaan cayaaraha qaabka caadiga ah isla markaana ku beddel abaalmarinta goobta dhacdada.
Bogga hore ee Bakhaarka ayaa loo habeeyay si loo xoojiyo mawduucyada cusboonaysiin kasta oo weyn.
Isku xidhka iskutallaabta ayaa lagu daray. Ka dib markii ay hawlgeliyaan, ciyaartoydu waxay fursad u heli doonaan in lala barbar dhigo ciyaartoy isku heer ah server-yada kale.
Ciyaartoyda si isdaba joog ah uga baxa kulamada isla marka ay bilaabaan waxaa laga ganaaxi doonaa kulamada isku aadka ah in muddo ah.
Ciyaartoydu way awoodi doonaan soo sheeg dabeecad shaki leh hada intaad daawaneysay ciyaar kadib dhimashadii.
Ciyaartoydu hadda waxay ururin karaan abaalmarinno hawl maalmeed hal mar.
A Nidaamka Dhammaystirka Hubka, oo ay ciyaartoydu u isticmaali karaan walxaha Sheybaarka si ay u cusbooneysiiyaan dhammeystirka hub gaar ah, si loo helo saamayn ciyaartoy oo dheeraad ah oo la tirtiray, diiwaanka tirtirka kala duwan ee sheekaysiga iyo maqaarka geerida geerida ka dib markii ciyaaryahan la tirtiro.
The Hanti nasiib, Muuqaal siinaya ciyaartoy fursad ay ku helaan Glacier Weapon Finish oo loogu talagalay M416 dhamaadka hawlgallada maalinlaha ah.
Abaal marinta xilliga ayaa lagu daray. Isticmaal qaddarro kala duwan si aad u hesho abaalmarinno waaweyn iyo qiimo dhimis ku saabsan dhammeystirka hubka.
Taageerada Carabiga ayaa lagu daray.
ka Ciyaartoyda hadda uma baahna inay doortaan oo ah luqad labaad oo loogu talagalay isku-dhafka iyo wada sheekaysiga.
Nidaamka wada sheekaysiga hadda ma cuno xusuus badan wuxuuna kaydiyaa farriimo dheeri ah.
Amarro cusub ayaa lagu daray Quick Chat.
Una taxane weyn oo war ah oo loogu talagalay PUBG Mobile nooca 0.10 sida khariidada cusub ee barafka, mootada barafka, qaabka cimilada cusub iyo iskuduwaha iskutallaabta serverka. Haatan aan sugno inaan xirno dharka jiilaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » PUBG Mobile » Nooca 'PUBG Mobile' 0.10 wuxuu imaan doonaa Diisambar 20 oo leh khariidadda cusub ee barafka 'Virkendi'
Sida looga soo degsado sheekooyinka, sawirrada iyo fiidyowyada Google Allo